Articles tagged 'luke tamborinyoka'
Tamborinyoka acquitted of all charges 1 August 2018 HARARE - MDC Alliance official Luke Tamborinyoka has been cleared of all charges of defacing a rival's political campaign posters. Tamborinyoka, a former spokesman of presidential candidate Nelson Chamisa, faced two charges of contravening section 152 the Electoral Act split by the prosecution...
Tamborinyoka charged again for defacing posters 18 July 2018 HARARE - MDC Alliance Goromonzi West candidate Luke Tamborinyoka has been charged again for allegedly defacing a rival's political campaign posters. Tamborinyoka, who is already on remand in another court over the same allegations, was hauled before magistrate Francis Mapfumo with the State no...
Tamborinyoka up for defacing rival's campaign posters 29 June 2018 HARARE - MDC Alliance Goromonzi West candidate Luke Tamborinyoka, was hauled before the courts yesterday for allegedly pasting his campaign posters on top of a party competitor's during primary elections. Tamborinyoka, 46, was jointly charged with Tapiwa Murima, 39, when he appeared before Har...
Chamisa heads to United Kingdom 5 May 2018 HARARE - MDC Alliance president Nelson Chamisa this weekend leaves for the United Kingdom where he will take the opportunity to interact with Zimbabweans in the Diaspora. MDC presidential spokesperson and director for communications Luke Tamborinyoka said Chamisa will meet members of the acade...
Chamisa apologises for harassment of journalists 10 March 2018 HARARE - Press freedom group Misa-Zimbabwe on Thursday condemned the harassment against journalists attending MDC president Nelson Chamisa's press briefing and demanded an end to the impunity enjoyed by those guilty of intimidation against members of the press. A senior reporter from the State...
Plot to silence Tsvangirai's spokesperson exposed 15 January 2018 HARARE - Top hawks in the MDC have scaled up a campaign to discredit and muzzle Morgan Tsvangirai's spokesperson on allegations of abandoning his responsibilities. Luke Tamborinyoka, the spokesperson for the MDC leader, stands accused of taking sides in the battle to succeed the former prime m...
Mujuru roasts 'drowning' Biti 5 December 2016 HARARE - In a savage slap down of People's Democratic Party (PDP) leader Tendai Biti, former Vice President Joice Mujuru's Zimbabwe People First (ZPF) has described the erstwhile top lieutenant of opposition leader Morgan Tsvangirai as “politically drowning” and desperate to save his “sinking” sh...
Govt withdraws Tsvangirai's security 24 August 2013 HARARE - Former Prime Minister, Morgan Tsvangirai has been stripped of his police security privileges. Luke Tamborinyoka, Tsvangirai's spokesperson yesterday said police who were assigned to the former PM were withdrawn yesterday. “To us it means nothing because he never expected anything g...
Crash shocks Tsvangirai 6 November 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai has expressed shock at his spokesman Luke Tamborinyoka s horror crash. The PM s spin-doctor, a trained journalist, is currently receiving care and treatment at Harare s Avenues Clinic, where he was still in critical condition in the Intensive Care Unit, d...
PM spokesperson in horror crash 5 November 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai s spokesperson Luke Tamborinyoka was yesterday involved in a horror crash as he drove to his rural home in Domboshawa, 30km east of Harare. Kudakwashe Matibiri, a close friend to Tamborinyoka, confirmed the accident and said the PM s spokesperson is in a ...